के मलिना र अनुपको सम्बन्ध सुध्रिएकै हो ??? – Fursad Nepal
October 4, 2017	Featured, Nepali Movie News, फुर्सद फिल्मी 126 Views
कुनै समय प्रेममा रहेका अनुपविक्रम शाही र मलिना जोशीको कुरामा विश्वास गर्ने हो भने उनीहरुको ब्रेकअप भएको लामो समय भईसक्यो । ब्रेकअपको खबरपछि एकअर्कासंग बोलीसमेत नमिसाएका उनीहरुले ‘रानी’ चलचित्रमा एकसाथ काम गरेका छन् ।
प्रचारप्रसारको लागि एकसाथ नआएका अनुप र मलिना एक्कासी फेसबुक लाईभमा देखिँदा सबैजना चकित भए ।मलिनाले आफनो अफिसियल फेसबुक अकाउण्टमा केही दिनअगाडीमात्र अनुपविक्रमको साथमा ‘रानी’ चलचित्रलाई लिएर अनुपलाई साथी भन्दै फेसबुक लाईभ गरेकी थिईन् ।हाल उक्त लाईभ भिडियो फेसबुकबाट डिलिट भईसकेको छ ।
एकसाथ लाईभमा देखिएका अनुप र मलिनाको सम्बन्धमा फेरीएक पटक मिलाप भएको हो ??? के अझै पनि उनीहरु प्रेमसम्बन्धमा नै रहेका छन् ??? की उनीहरुको सम्बन्ध अब मित्रतामा मात्र सिमित हो ??? यस्ता प्रश्नहरु उनका शुभचिन्तकहरुमा पक्कै उब्जिएका छन् तर यसको जवाफ त उनीहरुले नै दिने हो तर कहिले सम्म ???
anoop bikram shahi malina joshi movie rani relation of anoop and malina	2017-10-04
Tags anoop bikram shahi malina joshi movie rani relation of anoop and malina
Previous भिडियो सार्बजनिक भयो, चलचित्र चर्खामा समाबेश घन घन मादल घनकीयोको
Next सौगात मल्ल पनि दयाहाङ कै पथमा